2 KỌRINT 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2KỌR 4)
2 KỌRINT 4
Ya mere, ebe anyị maara na ọ bụ Chineke nyere anyị ọrụ a, site nꞌebere ya, ike adịghị agwụ anyị inwe olileanya.
Anyị adịghị ejegharị naaghọgbu ndị mmadụ ime ka ha kwere. Anyị adịghị ejegharị na-agwa onye ọ bụla ka o kwere ihe anyị maara na akwụkwọ nsọ ekwughị. Anyị adịghị etinye aka nꞌihe ihere dị otu a. Kama dị ka a ga-asị na anyị guzo nꞌihu Chineke, anyị na-ekwu eziokwu, dị ka onye ọ bụla na-anụ olu anyị maara na anyị na-ekwu eziokwu.
Ma a sịkwa na ozi ọma nke anyị na-ekwusa dị ka ihe e zoro ezo nye onye ọ bụla, ọ bụ ihe e zoro ezo nye ndị ahụ na-ala nꞌiyi,
Nꞌihi na ọ bụghị anyị onwe anyị ka anyị na-ekwusa, kama anyị na-ekwusa na Kraịst Jisọs bụ Onyenwe anyị. Ma nanị ihe anyị na-ekwu banyere onwe anyị bụ na anyị bụ ndị ọrụ unu nꞌihi ihe Kraịst rụrụ nꞌime anyị.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-esogbu anyị ma Chineke adịghị ahapụ nanị anyị; mgbe ụfọdụ, a na-akụtu anyị nꞌala ma anyị na-ebilikwa na-aga nꞌihu.
Ọtụtụ mgbe anyị na-ahụ ọnwụ anya, dị ka Jisọs hụrụ ya. Ka e si otu a mee ka ọ pụta ìhè, na ọ bụ Kraịst onye bi nꞌime anyị na-echebe anyị na-eme ka anyị dịrị ndụ na-aga nꞌihu.
Nꞌezie, mgbe nile a na-arara anyị bụ ndị di ndụ na-enye nꞌaka ọnwụ, nꞌihi na anyị na-ejere Jisọs ozi. Ma nke a na-enye anyị ohere igosi ike Jisọs nke na-arụsi ọrụ ike nꞌime ndụ anyị.
Nꞌihi ozi ọma anyị na-ekwusa, anyị na-anọ nso nꞌọnụ ọnwụ, ma nkwusa ozi ọma anyị ewetarala unu ndụ ebighị ebi.
Anyị na-ekwupụta ihe anyị kweere na-atụghị ụjọ ọ bụla, nꞌihi na anyị kweere na Chineke, dị ka e si dee ya nꞌakwụkwọ Abụ Ọma sị, “Ekweere m na Chineke, ya mere aga m ekwupụtakwa ihe m kwenyere.”
Anyị maara na Chineke, onye mere ka Onyenwe anyị Jisọs si nꞌọnwụ bilie, ga-emekwa ka anyị soro Jisọs si nꞌọnwụ bilie. Anyị makwaara na ọ gaechebe anyị na unu, tutuu ruo mgbe ọ kpọbatara anyị nꞌihu ya.
Nꞌihi na nsogbu ndị a anyị na-enwe ugbu a, na-adịgide nanị nwa oge nta. Ma ahụhụ ndị a ga-ewetara anyị ebube na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi, nke dị ukwuu karịa nsogbu ndị a.
Nꞌihi na anyị adịghị ele ihe anya nwere ike ịhụ, kama anyị na-ele anya nꞌihe ahụ anya na-adịghị ahụ. Nꞌihi na ihe ahụ anya na-ahụ na-adị nanị nwa oge, ma ihe ahụ anya na-adịghị ahụ na-adị ruo mgbe ebighị ebi.
2 KỌRINT 4:2
2 KỌRINT 4:5
2 KỌRINT 4:9
2 KỌRINT 4:10
2 KỌRINT 4:11
2 KỌRINT 4:12
2 KỌRINT 4:14
2 KỌRINT 4:17
2 KỌRINT 4:18